I-China Enenzuzo Yiwu Toy Toy Isitolo esidayisa yonke impahla Umhlahlandlela Ohamba phambili Ofanele Ukwazi | Abadayisi Union
Ngabe ufuna ukungenisa amathoyizi anenzuzo kusuka Yiwu emakethe, kepha awazi ukuthi ungaqala kanjani? Namuhla ungathola umhlahlandlela wemakethe yamathoyizi omuhle kakhulu futhi uthuthukise kalula ibhizinisi lamathoyizi. Ake siqale ukuhlola:
1. Ukubuka konke kwe-Yiwu Toy Market
2. Imikhiqizo etholakalayo nemvelaphi yayo emakethe yamathoyizi ye-Yiwu
3. Kungani ukhetha i-Yiwu Toy Market
4. Ungawathengisa kanjani amathoyizi amaningi kusuka kwa-Yiwu
Njengomkhakha onamandla e-Yiwu, amathoyizi athengiswe emazweni angaphezu kwezi-200 nezifunda. Izibalo zikhomba ukuthi ama-60% weziqukathi ezithunyelwa kusuka e-Yiwu ziqukethe amathoyizi. Uma ufuna ukuvakashela i-Yiwu Toy Market, sicela uqaphele ukugxadaza iholide loMkhosi Wentwasahlobo. Imvamisa amahora alo okusebenza aqala ngo-09: 00 kuye ku-17: 00, kepha ivalwa izinsuku eziyi-15 ngesikhathi soMkhosi Wentwasahlobo.
I-Yiwu Toy Market imikhiqizo etholakalayo kanye nemvelaphi
1. Le makethe yokuthengisela abathengisi abaningi inezifunda ezine, isifunda ngasinye sinemigwaqo eyi-12. Okulandelayo yizinhlobo ezahlukene zezindawo zokudlala:
Indawo B: Amathoyizi aphambili, inombolo yedokodo ingu-601-1200;
Indawo C: amathoyizi amahle, amathoyizi afuthwayo, amathoyizi eqembu, amathoyizi epulasitiki, inombolo yedokodo ngu-1201-1800;
Indawo D: amathoyizi epulasitiki, amathoyizi kagesi, amathoyizi enziwe ngokhuni, inombolo yamadokodo ingu-1801-2400;
UZone E: Amathoyizi epulasitiki, amathoyizi ajwayelekile, amathoyizi ezipho, amathoyizi ephathi, idokodo elingu-2401-3000;
2. I-Yiwu Toy Market Wholesale iqoqa amathoyizi amanoveli namazinga aphezulu avela kulo lonke elaseChina. Amathoyizi akhiqizwa e-Yiwu ikakhulukazi afaka amathoyizi amancane epulasitiki, amathoyizi amahle, namathoyizi afuthwayo. Isizinda sokukhiqiza siseYixi Industrial Park. Iningi lamathoyizi amakhulu aphezulu avela emakethe yaseGuangzhou noma eChenghai. Uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngezindawo zokukhiqiza zamathoyizi amaShayina, sicela uchofoze: Izimakethe Eziyisithupha ZaseThayina Eziyizitolo.
3. Abathengisi abaningi bathanda ukudlala amamodeli amasha noma athandwayo ngaphandle kwedokodo noma ehholo, futhi babonisa imikhiqizo ngangokunokwenzeka. Ukuhlukaniswa kwemakethe yamathoyizi ye-Yiwu nakho kuhle, futhi ungabhekabheka kalula imikhiqizo evela ngaphandle. Okulandelayo ezinye izithombe zomkhiqizo wemakethe yamathoyizi ye-Yiwu:
Izinzuzo ze-Yiwu Toy Market
1. Ungathola wonke amathoyizi owadingayo lapha, kufaka phakathi amathoyizi wokwakha, isikhala se-capsule amathoyizi, amathoyizi e-fidget, amathoyizi e-dinosaur, amathoyizi ezemfundo, amathoyizi wezingane, amathoyizi we-TPR, njll.
2. Ukuvuselelwa okusheshayo kungenye inzuzo emakethe yamathoyizi ye-Yiwu, njenge: ibhalansi isikuta kanye nokuncipha. Njalo ngesonto (noma nsuku zonke) kunemiklamo emisha emakethe.
3. Ubuningi be-oda obuncane buphansi, futhi ubuncane be-oda obuncane buphansi njengebhokisi eli-1 / libiza ama-USD 200. Ukuhanjiswa kwamahhala (endaweni yokugcina izinto i-Yiwu) imvamisa kudinga ukuthi umphakeli ofanayo anikeze amabhokisi ama-5-10 we-CTN. Into ebaluleke kunazo zonke intengo ephansi, efanelekile kunoma yiliphi inani labathengi banoma yiluphi uhlobo.
Ungayithenga Kanjani Emakethe Yokudlala ye-Yiwu
1. Uma uza e-Yiwu Toy Market uzofuna imikhiqizo mathupha, sicela uqiniseke ukuthi ugqoka izicathulo ezikhanyayo nezingubo ezintofontofo. Ngoba imakethe yamathoyizi ye-Yiwu inkulu, kungathatha usuku ukubhekabheka. Ungapheqa ibhulokhi ngebhulokhi ngokusho kwenombolo yedokodo. Qaphela: Ngenxa yomehluko wentengo phakathi kwamadokodo, ungaqhathanisa kangcono amanani wabaphakeli abangaphezu kwabathathu, futhi unake ukuqhathanisa ikhwalithi ukuze uqonde ukuthi ngabe iyimboni yini. Imakethe yamathoyizi ye-Yiwu nayo inamathoyizi esitokisi esivunyelwe, okuvame ukuthi ashibhe kakhulu kepha asezingeni elifanayo. Imvamisa kuthatha isikhathi esithe xaxa ukuthola imikhiqizo enjalo. Imvamisa akunakwenzeka ukuthola amasampula mahhala emadokodweni, ngoba iningi lawo linesampula elilodwa kuphela lokuboniswa futhi lidinga ukudluliswa lisuka efektri. Intengo yesampula ivame ukuphakama kunentengo ye-wholesale.
Zonke izitolo zinomthengisi okungenani oyedwa. Uma unentshisekelo ngemikhiqizo yabo, ungabuza ngemikhiqizo yabo futhi bangakulethela yona. Ungayibiza ngokuthi "laoban", uyiphimise ngokuthi "Lorban", futhi abukho ubunzima ekucaphuna noma ekubhekaneni nemibuzo elula ngesiNgisi. Ungakhohlwa ukugcina irekhodi ngemuva kokufunda ngentengo, ukupakisha, ne-MOQ. Ezitolo ezinentshisekelo, ungacela amakhadi abo ebhizinisi ukuze uxhumane nabo kamuva. Uma ubambisene nomenzeli wokuthenga we-Yiwu, ngemuva kokunquma umkhiqizo owufunayo, bazokusiza ukuphatha zonke izinqubo. Sicela uthole i-visa ngaphambi kokuvakashela eChina.
2. Uma ungeke uze eChina, ungacinga imikhiqizo yemakethe yamathoyizi ye-Yiwu ngeziteshi eziku-inthanethi, noma ufune abasebenzela ubuchwepheshe be-Yiwu bokuthenga abazokusiza. Kunezinhlobo eziningi zabahlinzeki online, futhi kungcono ukuqinisekisa ukuthembeka kwazo ngaphambi kokufaka i-oda. Ngenqubo ephelele yokungenisa esuka eChina, sicela uvakashele:
Ungabakhetha kanjani abahlinzeki abanokwethenjelwa
Hlola ikhwalithi bese uhlela ukuthumela
Landelela futhi wamukele izimpahla
Funda imigomo eyisisekelo yokuhweba
Ubani ongakusiza ukuba uzuze kalula Ngenisa Amathoyizi kusuka China
Sellersunion kuyinto ngobukhulu sourcing agent in Yiwu. We can help you quickly find a reliable manufacturer with the lowest price, follow up production, ensure quality, and deliver door to door. You can also have your own customized private label products to further differentiate yourself from competitors. If you can’t come to Yiwu, our online showroom allows you to choose Chinese toys online. We can also provide live broadcast of Yiwu toy market to see products more intuitively. Save your time and cost, ungaxhumana nathi manje.
Isikhathi Iposi: Feb-03-2021